Uwine kwavuleka ithuba elivelele owaseThekwini
ISIZONGENA esitolo imisiko kaNksz Sithembile Mncwango owine emncintiswaneni i-The Workshop Young Designers eyingxenye yokuthuthukisa abasiki bengqephu eThekwini Isithombe: SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | September 19, 2019
UBEDAYISELA egaraji lakubo umsiki wengqephu owine umncintiswano ohambisana nethuba lokufaka izimpahla zakhe ezitolo ozophinde acijwe ikhono kulo mkhakha.
UNksz Sithembile Mncwango (27) waseLamontville, uphume phambili emncintiswaneni iThe Workshop’s Young Designers, obuhlose ukubheka abasiki abasebasha kodwa abanekhono. UNksz Mncwango ohlabane ngoR150 000 kulo mncintiswano, ulandelwe uMnuz Judaine Naidoo noMnuz Thoba Mbelu. Umncintiswano bewenziwe ngokuhlanganyela nenxanxathela yezitolo iThe Workshop, uMasipala weTheku, iDurban Fashion Fair, i-East Coast Radio nabakwaVodacom.
UNksz Mncwango uthe ubengalindele ukuthi angadla umhlanganiso kulo mncintiswano ngoba bangenela bebaningi kakhulu.
“Ngabona isikhangiso ephepheni ngalo mncintiswano ngabona kumele ngizame inhlanhla. Sabizwa nabanye abangenele sibaningi kakhulu, satshelwa ukuthi kuzothathwa abalishumi kuphela abazoncintisana. Bengingalindele ukuthi nami ngingangena kwabalishumi,” kuchaza yena.
Usuku lwamanqamu lomncintiswano belungempelasonto enxanxatheleni yezitolo eWorkshop. Abasiki abebencintisana bekumele bahlanganise umsiko ngamahora amabili phambi kwamajaji nezihlwele. Bekudingeka kube umsiko ongawugqoka kunoma yimuphi umcimbi uphinde uthathe amehlo. Bekubhekwe nokuthi uhambisane nentwasahlobo njengoba kuyisikhathi sayo. UNksz Mncwango uthe ukuwina kumvulele amathuba. Uthe emuva kwalo mncintiswano usethole amakhasimende amaningi, okuzokhulisa umsebenzi njengoba phambilini ubesebenzela egaraji kubo.
“Ngithemba ukuthi ngisazothola amanye amakhasimende njengoba izimpahla zami sezizongena kwesinye sezitolo eWorkshop. Ngizophinde ngiqeqeshwe ngaphansi kohlelo lweDurban Fashion Fair engangikade ngifisa ukungena kulo kodwa ngingathathwa,” kusho yena.
Uthe izimpahla zakhe kungenzeka zingene ngoDisemba noma ekuqaleni konyaka ezitolo ngoba kukhona okusalungiswa.
Amajaji kulo mncintiswano bekunguMxolisi Mkhize weThe House of St Luke, uKwenzi Nkomo we-Indoni Fashion House noLindiwe Kuzwayo weLindiwe Kuzwayo Fashion Design Studio neLindiwe Kuzwayo Academy of Fashion. Lo mncintiswano uyingxenye yezinhlelo zeDurban Fashion Fair ehambisana nombukiso wemfashini oqala ngoLwesithathu uphele ngoMgqibelo eNkosi Albert Luthuli ICC.